Ndị Enyi Ọjọọ Mere Ka Jehoash Hapụ Jehova | Kụziere Ụmụ Gị Ihe
Jizọs Ọ̀ Bụ Chineke?
TEACH YOUR CHILDREN Ndị Enyi Ọjọọ Mere Ka Jehoash Hapụ Jehova
GỤỌ NKE Afrikaans Albanian Arabic Armenian Bicol Bulgarian Cebuano Chinese Mandarin (Simplified) Chinese Mandarin (Traditional) Croatian Czech Danish Dutch Efik English Estonian Finnish French German Greek Hiligaynon Hindi Hungarian Igbo Iloko Indonesian Italian Japanese Korean Lithuanian Malagasy Myanmar Norwegian Polish Portuguese Romanian Russian Serbian Setswana Slovak Slovenian Spanish Swedish Tagalog Telugu Thai Tiv Tsonga Turkish Ukrainian Vietnamese Xhosa Zulu
Ụlọ Nche | 2009-04-01
Ndị Enyi Ọjọọ Mere Ka Jehoash Hapụ Jehova
EBE niile nọ na-azụ wuruwuru na Jeruselem, bụ́ ebe ụlọ nsọ Chineke dị. E gbuola Eze Ehazaya. Ma, ị gaghị ekweta ihe mama Ehazaya, bụ́ Atalaya, meziri. O gburu ụmụ Ehazaya, bụ́ ụmụ ụmụ ya! Ị̀ maara ihe mere o ji gbuo ha?— * Ọ bụ ka o nwee ike ịghọ eze kama otu onye n’ime ha ga-aghọ ya.
Ma, e gbughị otu nwa nwa Atalaya aha ya bụ Jehoash, nne nne ya amaghịkwa. Ị̀ chọrọ ịma otú e si zọọ ya ndụ?— Nwanne nna Jehoash, bụ́ Jehoshiba, zoro ya n’ụlọ nsọ Chineke. Ihe mere o ji nwee ike ime ya bụ na ọ bụ di ya, bụ́ Jehoyada, bụ Nnukwu Onye Nchụàjà. N’ihi ya, ha abụọ gbakọtara aka hụ na ọ dịghị ihe mere Jehoash.
E zoro Jehoash n’ụlọ nsọ ahụ ruo afọ isii. N’ebe ahụ ka a nọ kụziere ya ihe niile banyere Jehova Chineke na Iwu ya. Mgbe Jehoash gbara afọ asaa, Jehoyada meziri ya eze. Ị̀ chọrọ ịnụ otú Jehoyada si mee ya na ihe mechara mee nne nne Jehoash, bụ́ Eze Nwaanyị Atalaya?—
Ọ dị mma. Jehoyada zooro ezoro gaa kpọkọta ndị nche na-eche ndị eze chịrị na Jeruselem nche n’oge ahụ. Ọ gwara ha otú ya na nwunye ya si zọọ nwa Eze Ehazaya ndụ. Jehoyada kpọpụtaziri Jehoash ka ndị nche ahụ hụ ya, ha ekweta na ọ bụ ya kwesịrị ịchị obodo ahụ. Ha kpebiziri ihe ha ga-eme.
Jehoyada kpọpụtara Jehoash n’èzí ma mee ya eze. Mgbe ahụ, ndị obodo ahụ malitere “ịkụ aka, na-asị: ‘Eze, ị ga-adị ndụ!’” Ndị nche ahụ gbara Jehoash gburugburu ka ihe ọ bụla ghara ime ya. Mgbe Atalaya nụrụ mkpọtụ obi ụtọ ahụ, ọ gbapụtara, sị na ha gbara ya izu ọjọọ. Ma, Jehoyada nyere ndị nche ahụ iwu ka ha gbuo Atalaya, ha egbuokwa ya.—2 Ndị Eze 11:1-16.
Ì chere na Jehoash nọgidere na-ege Jehoyada ntị ma na-eme ihe dị mma?— O mere otú ahụ n’oge niile Jehoyada nọ ndụ. Jehoash medịrị ka ndị mmadụ tụọ ego e ji rụzie ụlọ nsọ Chineke, bụ́ nke Ehazaya nna ya na Jehoram nna nna ya leghaara anya. Ma, ka anyị hụ ihe meziri mgbe Jehoyada, bụ́ Nnukwu Onye Nchụàjà, nwụrụ.—2 Ndị Eze 12:1-16.
A zọrọ Jehoash ndụ
Mgbe ahụ, Jehoash dị ihe dị ka afọ iri anọ. Kama Jehoash ịnọgide na-eme ndị na-efe Jehova enyi, ọ gara meta ndị na-efe arụsị enyi. Zekaraya, nwa Jehoyada, bụ onye nchụàjà Jehova n’oge ahụ. Olee ihe i chere Zekaraya mere mgbe ọ nụrụ banyere ihe ọjọọ Jehoash na-emezi?—
Zekaraya gwara Jehoash, sị: ‘Ebe ọ bụ na ị hapụla Jehova, ya onwe ya ga-ahapụ gị.’ Okwu ahụ were Jehoash ezigbo iwe, ya enye iwu ka e jiri nkume tụgbuo Zekaraya. Legodị nnọọ anya, a napụtara Jehoash n’aka onye chọrọ igbu ya, ma ugbu a, ya enye iwu, e gbuo Zekaraya!—2 Ihe E Mere 24:1-3, 15-22.
Ò nwere ihe i chere anyị nwere ike ịmụta n’akụkọ a?— N’eziokwu, anyị ekwesịtụdịghị ịdị ka Atalaya, bụ́ onye obi ọjọọ na onye arụrụala. Kama nke ahụ, anyị kwesịrị ịhụ ma ndị anyị na ha na-efekọ Jehova ma ndị iro anyị n’anya, otú ahụ Jizọs kụziiri anyị ka anyị na-eme. (Matiu 5:44; Jọn 13:34, 35) Chetakwa na ọ bụrụ na anyị amalite ime ihe dị mma otú ahụ Jehoash mere, anyị kwesịrị ịnọgide na-emeta ndị hụrụ Jehova n’anya na ndị ga-agba anyị ume ife ya, enyi.
Olee otú e si zọọ Jehoash ndụ, ònyekwa zọrọ ya?
Olee otú Jehoash si ghọọ eze, oleekwa ihe ọma o mere?
Gịnị mere Jehoash ji ghọọ onye ọjọọ, ònyekwa ka o gburu?
Olee ihe ndị anyị nwere ike ịmụta n’akụkọ Baịbụl a?